यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्, बन्नसक्नुहुन्छ कंगाल ! – Sandesh Press
यी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्, बन्नसक्नुहुन्छ कंगाल !
October 3, 2021 290
काठमाडौँ । दान दिनु आफैंमा उत्तम कार्य हो । शास्त्रले पनि दान दिनु पुण्यको काम हो भनेको छ । दान दिँदा के दिने के, नदिने यसबारे भने जान्नैपर्ने हुन्छ ।
किनभने केहि यस्ता पनि चिज छन् जुन दान दिन अशुभ मानिन्छ । आज हामी दानमा दिन नहुने चिजबारे तपाइहरुलाई जानकारी दिन गइरहेका छौं ।
चाणक्य नीति अनुसारका तल उल्लेखित ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस् :
१.स्वंयबरको औंठी : स्वंयबरको औंठी भुलेर पनि अरुलाई नदिनुहोला अर्थात् दान नदिनुहोला । स्वंयबरको औंठी माया र प्रेमको निसानी वा माया र प्रेमको उपहार हो, यसले जीवनमा ठुलो महत्व राख्दछ, स्वंयबरको औंठी कोहि कसैलाई दान, उपहार र सापटीमा नदिनुहोला ।
२. घडी : घडीले तपाईको समय बताउँछ । राम्रो या ख राब समय घडी र तपाईको प रिस्थितिले जनाउँछ । घडी जुन व्यक्तिले सधैँ प्रयोग गर्ने गर्छ त्यहि व्यक्तिप्रति निर्भर रहेको हुन्छ । अरु कसैको घडी तपाईको नाडीमा बाध्नु भनेको तपाईको जीवनमा अ सर गर्नु हो । जसको कारण तपाईले आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी साथीभाई या कोहि आफन्तले तपाईको हातमा लगाइराखेको घडी एकछिन वा एकदुई दिन मागेमा दिने काम नगर्नुहोला। अर्को कुरा अरुको हातको घडी पनि तपाईले नबाध्नु होला ।
यस्तै उपहार या दानमा पनि घडी दिनु राम्रो होइन । धेरैको बानी हुन्छ उपहारमा घडी दिने । अझ विदेशबाट आउनेले त प्रायजसो घडी नै उपहारमा दिने गर्छन् । तर त्यसो गर्नु नराम्रो हुने चाणक्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. पैसा : धन लक्ष्मीको कृपा हो । तर धनले कोही कसैलाई आफ्नो बनाउँन सकिदैन । उदाहरणका लागि तपाईले कसैलाई तलब दिएर राख्नुभएको छ र केहि दिन ढिला भयो भने तपाईमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भैहाल्छ।
अनि धनले कसरी आफ्नो बनाउँन सकिन्छ ?
शास्त्रका अनुसार धन सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । धनकै कारण कति आ परा धिक घटना घट्ने गरेको समाचार बेलाबेला आइरहन्छ। अझ आफन्तसँग त झन् पैसाको लेनदेन गर्नै हुँदैन । धनकै कारण सम्बन्ध तोडिन पनि सक्छ।
हामीले कसैलाई दान गर्दा पैसाको सट्टा अरुनै चिज दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै सापटीमा पनि सकभर पैसा नदिएकै राम्रो हुने वा नलिएकै राम्रो । किनभने पैसा सापटी लिएकै दिन त्यो मान्छेको नजरमा तपाई गिर्नुहुन्छ या लिने मान्छे गिर्छ।
Prevनायिका एलिजा गौतमले क्यानाडाबाटै सबैलाई चकित पारिन ,ऋषि धमलालाई सम्झिदै राखिन यस्तो पोष्ट
Nextटिनेजमै देखिनसक्छ पाठेघर क्यान्सरको समस्या, शरीरले दिने यी संकेतलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता
माओवादी नेतृ सन्तोषी पाण्डेको दुखद नि’धन
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन २९ गते आइतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पोखरा उडेको बुद्ध एयरको बिमानमा धुवाँ देखिएपछि काठमाडौं फिर्ता
थप्पड खाएका लामा भिक्षु फुर्वा तामाङको भनाई जस्ताको त्यस्तै -खासमा यस्तो भएको रहेछ ! (11144)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10989)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (7787)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (7773)
मुस्ताङका स्‍थानीय भन्छन् : घासामा ठूलो आवाज सुन्यौँ, आगो बलेको देख्यौँ (7518)
जहाज दुर्घटना परि ज्यान गुमाउने एयर होस्टेज किस्मिता थापा हिरोइन भन्दा कम छैन (फोटो सहित) (7197)
जहाज दुर्घटनामा परेकी एयर होस्टेज किश्मी थापाको टिकटक भिडियो भाइरल (भिडियो सहित) (7119)
देशमा पर्यो अर्को बज्रपात : हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, अन्य को अवस्था गम्भीर ! (6381)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (6331)